Baiboly pejy 661 - Ny Baiboly
Voalohany < 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 Manaraka Farany
1 Korintiana toko 9 (tohiny)
6Sa, izaho irery sy Barnabe ihany no tsy afa-mitsahatra amin'ny asa?
7Zovy no mpiantafika miantoka ny fivelomany? Zovy no mpiandry omby aman'osy tsy mivelona amin'ny rononony? 8Moa araka ny hevitr'olombelona fotosiny ve no ilazako izany, sa mba lazain'ny Lalàna ihany koa izany? 9Fa izao no voasoratra amin'ny Lalàn'i Moizy: Aza mamatotra ny vavan'ny omby mively vary. Ny omby ve no ahoan'Andriamanitra, 10sa noho izahay indrindra no nilazany an'izany? Eny, noho izahay tokoa no nanoratana izany; satria izay miasa tany, tsy maintsy miasa amim-panantenana; ary izay mively vary, tsy maintsy mively amim-panantenana ny anjarany koa. 11Ka raha namafy ny zava-panahy taminareo izahay, dia zava-dehibe ve raha mba mijinja ny anananareo araka ny nofo kosa? 12Ary raha ny hafa aza afaka miombona amin'ny anananareo, tsy mainka va fa izahay? Tsy nampiasa izany fahefana izany anefa izahay, fa mihafy amin'ny zavatra rehetra mba tsy hanampontsampona ny Evanjelin'ny Kristy. 13Tsy fantatrareo va fa izay manao ny raharaha masina dia mivelona amin'ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo ao amin'ny otely, dia miombona amin'ny otely? 14Toy izany koa no nandidian'ny Tompo fa izay mitory ny Evanjely, dia hahazo fivelomana amin'ny Evanjely.
15Izaho anefa dia sady tsy nampiasa izany fahefana izany no tsy nanoratra ity ho toy ny hitaky izany hatao amiko. Aleoko maty, toy izay ny voninahitro amin'izany no hofoanan'olona. 16Raha mitory ny Evanjely aho, dia tsy mba izany no voninahitro, fa adidy tsy maintsy efaiko izany, ka loza ho ahy raha tsy mitory ny Evanjely aho. 17Raha safidim-poko fotsiny no anaovako izany, dia hoe mendri-baly aho; fa didy no anaovako azy, ka dia adidy napetraka hiandraiketako izany. 18Inona àry no valisoa azoko? Izao ihany: mitory ny Evanjely aho, ary mitory azy maimaim-poana, fa tsy mampiasa ny fahefana ananako avy amin'ny Evanjely.
19Eny, na dia olona afaka aza aho, ka tsy mpanompon'iza n'iza akory, dia nilatsaka ho mpanompon'ny olona rehetra kosa, mba hahazoako olona maromaro kokoa. 20Tamin'ny Jody aho dia Jody, mba hahazoako ny Jody; 21tamin'izay ambanin'ny Lalàna aho, dia nanao toy ny ambanin'ny Lalàna aho, dia nanao toy ny ambanin'ny Lalàna (na dia tsy ambanin'ny Lalàna aza), mba hahazoako izay ambanin'ny Lalàna; tamin'izay tsy manan-dalàna aho, dia toy ny tsy manan-dalàna (na dia tsy olona tsy manan-dalàna amin'Andriamanitra aza aho, fa ambanin'ny lalàn'ny Kristy), mba hahazoako ny tsy manan-dalàna; 22tamin'ny malemy aho, dia hoatra ny malemy, mba hahazoako ny malemy. Eny, tonga toa azy rehetra tamin'ny olona rehetra aho, mba hamonjeko azy rehetra. 23Ary noho ny Evanjely no nanaovako izany rehetra izany, mba hananako anjara aminy.
24Tsy fantatrareo va fa maro no indray mihazakazaka ao amin'ny tany fifanalana hazakazaka, nefa iray monja no mahazo loka? Mihazakazaha toy izany mba hahazoanareo. 25Ny mpifanala hazakazaka rehetra dia mahonon-tena amin'ny zavatra rehetra; nefa satro-boninahitra mora levona no tadiaviny, fa ny tsy ho levona mandrakizay kosa no antsika. 26Raha izaho àry, dia mihazakazaka aho, nefa tsy manao mosalahy; mikapoka koa, nefa tsy toy ny mikapo-drivotra; 27fa asiako mafy ny tenako, ary andevoziko mihitsy aza, sao ny sasany nitoriako, nefa ny tenako kosa ho very.
1 Korintiana toko 10
Anatra ho an'ny mpino ankehitriny ny nanjò ny sasany fahiny - Fifadiana ny sakafo fomban-tsampy - Fitsipika sasany harahina.
1Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, fa tambanin'ny rahona ny razantsika rehetra; namaky ny ranomasina izy rehetra; 2ary natao batemy tamin'i Moizy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina izy rehetra; 3hanina ara-panahy iray ihany no nohanin'izy rehetra; 4ary fisotro ara-panahy iray ihany no nosotroin'izy rehetra, satria nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy ireo, ary Kristy izany vatolampy izany. 5Tsy sitrak'Andriamanitra anefa ny ankabiazan'izy ireny, fa lambam-bary tany an'efitra.
6Ary izany zavatra izany dia tonga mba ho anatra ho antsika, mba tsy hitsiriritra ny ratsy isika, toy ny nitsiriritan'ireny, 7mba tsy ho tonga mpanompo sampy hianareo, toy ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe: Nipetraka hihinana sy hisotro ny olona, dia nitsangana hilalao; 8mba tsy hijangajanga isika, tahaka ny sasany tamin'ireny, ka telo arivo sy roa alina izy no maty indray andro monja. 9Eny, aoka isika tsy haka fanahy ny Kristy, tahaka ny nakan'ny sasany tamin'ireny fanahy azy, ka matin'ny bibilava izy ireny; 10ary aoka hianareo tsy himonjomonjo tahaka ny sasany tamin'ireny, ka matin'ny anjely mpandringana izy ireny. 11Nozoin'izany rehetra izany izy ireny mba ho anatry ny sasany; ary nosoratana izany mba ho fananarana antsika tratr'izao andro farany izao.
12Koa aoka àry izay manao ny tenany ho mijoro tsara hitandrina sao lavo. 13Tsy nisy fakam-panahy namely anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona ihany; ary mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa isam-pankam-panahy dia hasiany fialana tsara mba hahazakanareo azy.
14Noho izany, ry malala, halaviro ny fanompoan-tsampy. 15Miteny aminareo toy ny amin'ny olona manan-tsaina aho, ka tsaraonareo izay lazaiko. 16Moa ny kalisim-pisaorana izay isaorantsika, tsy firaisana amin'ny ran'ny Kristy va? Ary moa ny mofo izay vakintsika, tsy firaisana amin'ny tenan'ny Kristy va? 17Satria iray ihany ny mofo, ka dia tena iray ihany koa isika na dia maro aza, fa mofo iray ihany no iombonantsika rehetra. 18Jereo ange Israely araka ny nofo e: moa tsy mpiombona amin'ny otely va, ireo mihinana amin'ny fanatitra atao sorona? 19Inona àry no lazaiko? Moa mba zavatra ihany va ny hena naterina tamin'ny sampy; na moa mba zavatra koa va ny sampy? 20Tsia, fa ny zavatra aterin'ny jentily ho fanatitra, dia ataony sorona amin'ny demony, fa tsy amin'Andriamanitra, ka tsy tiako ho mpiombona amin'ny demony hianareo. Tsy azonareo atao ny sady hisotro amin'ny kalisin'ny Tompo no hisotro amin'ny kalisin'ny demony koa; 21tsy azonareo atao ny sady hihinana amin'ny latabatry ny Tompo no hihinana amin'ny latabatry ny demony koa. 22Te-hampahasaro-piaro ny Tompo angaha isika? Mahery noho izy va isika?
23Tsy misy fady ny zavatra rehetra nefa tsy àry mahasoa avokoa izy rehetra; tsy misy fady ny zavatra rehetra, nefa tsy àry mahasoa fanahin'olona avokoa izy rehetra. 24Aza misy mitady ny ho an'ny tenany, fa ny ho an'ny namana. 25Hano avokoa izay amidy any an-tsena, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana, 26satria an'Andriamanitra daholo ny tany sy ny zavatra rehetra ao aminy. 27Raha misy tsy mpino manasa anareo, ka te-handeha hianareo, dia hano izay arosony anareo; ary aza manontany akory noho ny fieritreretana. 28Fa raha misy manao aminareo hoe: Natao fanatitra tamin'ny sampy io, no aza mihinana, noho ilay nilaza sy noho ny konsiansy.
Pejy: Voalohany < 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2896 seconds